Lets support our legitimate Government(24th April)
Events • Apr 26, 2021
"Lets support our legitimate Government"
On the previous Saturday of 24th April, we Myanmar ethnic brothers and sisters currently residing in Japan gathered and performed walking rally in order to support our duly elected Government NUG and performed demonstration in front of Ministry of Foreign Affairs to acknowledge NUG.
We TTAJ joined at said rally as one of demo groups.
We have to take systemic Covid 19 Precautious Measures such as utilizing Face Shields, Masks and using alcohol hand gel considering the rate of Covid 19 wave in Japan is getting higher at this very moment.
We would like to express our deepest gratitude to volunteers who not only followed our dress code (white top and Jeans), but also utilizing face shield without complaints under the very hot sun.
Our hearts are overwhelmed with joy and gratitude when we saw our volunteers crying, shouting and expressing their feelings with all their might wearing WHITE MASKS, SAME RED STRIPED FACE SHIELDS, WHITE TOPS and RED ARM BANDS.
Do join and support us TTAJ at the coming events and activities.
It really was an encouragement by our beloved volunteers.
Each and everyone of Myanmar at foreign countries stand together with those within the country.
"ငါတို့ရဲ့ တရားဝင်အစိုးရကို ငါတို့ ထောက်ခံကြ" ✊🏻✊🏻
ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်ရောက် မြန်မာ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို မောင်နှမများ စုပေါင်း၍ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)အား ထောက်ခံကြောင်း လမ်းလျှောက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားရေးသံရုံးရှေ့တွင် သံပြိုင်ဟစ်ကြွေးပြီး တောင်းဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။
TTAJ မှ အဖွဲ့လိုက် စစ်ကြောင်းတစ်ခုအဖြစ် ပူးပေါင်း ပါဝင် အားဖြည့်ခဲ့ပါတယ် ။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Covid ကူးစက်နှုန်းမှာလည်း တောက်လျှောက်တိုးလာနေတဲ့အတွက် Covid ကာကွယ်နိုင်စေရန် Mask/ Face Shield / လက်သန့်ဆေးရည် များအသုံးပြုပြီး စနစ်တကျ လူစုဝေးခဲ့ကြပါတယ် ။
TTAJ စစ်ကြောင်းမှ သတ်မှတ်ထားသော
အင်္ကျီအဖြူ၊ ဂျင်းဘောင်းဘီအပြာ ကို သေချာဝတ်ဆင်လာပေးသည့်အပြင် မွန်းတည့်နေပူကြဲတဲ ဖြစ်သော်ငြားလည်း Covid ကာကွယ်ရေးအတွက် Face Shield ဆင်တူများကို မငြီးမငြူဘဲ တပ်ဆင်ပေးပါသော TTAJ's Volunteers များ အားလုံးကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ။ 🙏
Mask အဖြူ၊ Face Shield ဆင်တူ၊ အင်္ကျီအဖြူရောင် နှင့် လက်ပတ်ကြိုးအနီ ဝတ်ဆင်လျက် ရင်ထဲခံစားရသမျှကို တညီတညွတ်တည်း အင်တိုက်အားထုတ် အော်ဟစ် ကြွေးကြော်နေကြပုံကို မြင်ရတိုင်း ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ရပါတယ် 🙏😭
နောက်လာမယ့် ပွဲတွေမှာလည်း TTAJ အဖွဲ့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းပြီးတော့ အားဖြည့်ဝန်းရံပေးကြပါအုံးနော် ☺️
Volunteers များရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုက တကယ်ကိုပဲ အားတစ်ခု ဖြစ်ရပါတယ် 💪
ပြည်သူအားလုံးညီနေတဲ့ ဒီပွဲမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် အဆုံးသတ်ကျရှုံးရမယ် 💪🏻💪🏻